बलात्कारकाे दर दैनिक ८ जना : ७ वर्षमा १४ हजार महिला र ६ हजार तीन सय ६३ बालिका बलात्कृत
छिटो खबर डेस्क २०७७ मंसिर १३ गते शनिबार १०:१९:४२ मा प्रकाशित
लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदै छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘ओरेन्ज द वल्र्ड : फन्ड, रेस्पोन्ड, प्रेभेन्ट, कलेक्ट’ नारा दिइएको यो अभियानमा नेपालमा भने ‘लैंगिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता ः व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबद्धता’ नारा दिएर मनाइँदै छ । महिलाविरुद्ध हुने हिंसा, विभेद, अन्यायको अन्त्य गर्ने अभियानका रूपमा विश्वभर हरेक वर्ष २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म यो अभियान मनाउने गरिएको छ । यो अभियानको उद्देश्य महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्नु नै हो । यो अभियानका क्रममा लैंगिक हिंसाविरुद्ध जनचेतना जगाउने कार्यक्रम गरिँदै आएको छ । यसै बीच नयाँ पत्रिकाले बलात्कारकाे तथ्या‌ंक सार्बजनिक भएकाे छ । बलात्कारसम्बन्धी जघन्य अपराधका घटना हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेका छन् । पछिल्ला सात वर्षमा १४ हजार सात सय ५४ महिला बलात्कारको सिकार भएका छन् । त्यसमध्ये ६ हजार तीन सय ६३ त १८ वर्षमुनिका बालिका छन् ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा एक हजार तीन सय ५६ महिला बलात्कारको सिकार भएका थिए । तर, आव ०७६/७७ सम्म आइपुग्दा यो संख्या दोब्बरभन्दा धेरैले बढेको छ । यो वर्ष दुई हजार आठ सय ३१ महिला बलात्कृत भएका थिए । चालू आवको असोजसम्म सात सय २२ महिला बलात्कृत भएको प्रहरीको तथ्यांक छ ।
हरेक वर्ष बलात्कृत हुने बालिकाको संख्या पनि डरलाग्दो गरी बढिरहेको छ । आव ०७०/७१ मा पाँच सय ५९ बालिका बलात्कारको सिकार भएका थिए । गत आवमा आइपुग्दा बलात्कृत बालिकाको संख्या एक हजार तीन सय ९३ पुगेको छ । त्यसमा पनि दुई सय ७३ बालिका त दश वर्षभन्दा कम उमेरका छन् । त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको गत असोजसम्म भएका सात सय २२ घटनामा चार सय ६५ बालिका बलात्कारको सिकार भएका छन् ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार आफन्त र छिमेकीबाटै धेरै बलात्कारका घटना भएका छन् । ‘चार वर्षका नाबालिकासम्म बलात्कारको सिकार भएका छन् । धेरैजसो घटना आफन्त र चिनजानकै व्यक्तिहरूबाट भएका छन्,’ उनले भने । शंकास्पद व्यक्तिबाट टाढा रहन र यस्ता घटनाबाट जोगिन प्रहरीले स्कुलहरूमा गएरै पढाउनसमेत थालेको एसएसपी कुँवरले बताए । पछिल्लो समय हिंसा लुकाउनुहुँदैन भन्ने चेतना बढेकाले प्रहरीमा आउने उजुरी पनि बढेको उनको भनाइ छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव ०७५/७६ मा देशभर दुई हजार सात सय ५३ महिला बलात्कारको सिकार भएका छन्, जसमध्ये एक हजार दुई सय ३२ बालिका छन् । त्यस्तै, आव ०७४/७५ मा पीडित बनेका एक हजार नौ सय आठ महिलामध्ये सात सय २३ र ०७३/७४ मा एक हजार नौ सय १४ पीडित महिलामध्ये सात सय नौ बालिका रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।
जबर्जस्ती करणी/उद्योग दर्ता भएको मुद्दामा पीडितको अवस्था
आव ०७२/७३ मा देशभर एक हजार ६ सय ५५ महिला बलात्कृत भएका थिए, त्यसमध्ये ६ सय ३५ बालिका छन् । ०७१/७२ मा पीडित बनेका एक हजार ६ सय १५ महिलामध्ये ६ सय ४७ बालिका छन् । त्यस्तै, ०७०/७१ मा एक हजार तीन सय ५६ महिला बलात्कारको सिकार बनेका थिए, जसमा तीन सय ९६ बालिका रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तथ्यांक छ ।
गत वर्ष बलात्कृत एक हजार तीन सय ९३ बालिकामध्ये दुई सय ७३ जना १० वर्षमुनिका छन् । त्यस्तै, ११ देखि १६ वर्षसम्मका आठ सय एक र १७ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका तीन सय १९ जना बलात्कृत भएका छन् ।
प्रहरीको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ मा तीन सय १९ र सबैभन्दा कम कर्णालीमा ८१ बालिका बलात्कृत भएका छन् । त्यस्तै, लुम्बिनीमा दुई सय ३४, प्रदेश २ मा दुई सय चार, बागमतीमा एक सय ६५, काठमाडौं उपत्यकामा एक सय ३७, सुदूरपश्चिममा एक सय २९ र गण्डकीमा एक सय २३ बालिका बलात्कारको सिकार भएका छन् ।
यो वर्ष दैनिक आठ बलात्कारका घटना
चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा औसत दैनिक आठ बलात्कार तथा बलात्कार प्रयासका घटना भएका छन् । साउनदेखि असोजसम्म सात सय २२ घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा बलात्कारपछि हत्याका ११ घटना भएका थिए । त्यस्तै, आव ०७६/७७ मा दुई र चालू आवमा एक बलात्कारपछि हत्या घटना भएको प्रहरीको तथ्यांक छ ।
स्राेत : नयाँ पत्रिका
छिटो खबर डेस्कबाट थप
अमेरिकी चुनाव : जो बाइडेन व्हाइट हाउस छिर्ने तयारीमा, ट्रम्प अदालत तिर
नाका बाट सामान छुटाउन चिनियाँ एजेन्टलाइ घुस
के हो अधिकमास ? अधिकमासमा के गर्ने, के नगर्ने ?
पुजारी हत्या बिरुद्ध हुने प्रदर्शन रोक्न गोप्य सर्कुलर
कार्यकारी अधिकृत र लेखापालविरुद्ध गाउँपालिका प्रमुखको उजुरी
थानामै राज्यमन्त्री को हत्या गर्ने विकास दुबे : को हुन उनी जसलाइ पक्राउ गर्न जांदा ८ प्रहरी मारिए ।
एउटा खरबुजाका लागि भएको युद्ध, जहाँ मारिए हजारौँ सैनिक
पश्चिम नेपालमा वर्षा हुने : निसर्ग चक्रवातको प्रभाव